Amafreyimu ama-eyeglass e-Brazing ane-Induction | Umakhi womshini wokushisa wokungeniswa | izixazululo zokushisa zokungeniswa
I-Brazing Eyeglass Amafomu Nge-Induction
Injongo: Hlela amalunga ebhaja aphindaphindiwe emhlanganweni wezinhlaka ze-eyeglass. Ukushisa kwe-Induction kufanele kusetshenziselwe ukufeza amalunga ebhontshisi wekhwalithi ebhuloho lempumlo, ibhuloho ye-brow kanye nento yangaphakathi. I-Brazing kufanele yenziwe ku-1300 ° F cishe ngamasekhondi angu-3-5 avunyelwe ukushisa. Ikhwalithi ye-surface iyinto ebaluleke kakhulu ngoba ukukhethwa kwe-post-brazing cleanup kunqunyelwe.
Okubalulekile: I-Monel Bridge ne-18% Silver Braze
Ukushisa: 1300 ° F
Ukuvama: 600 kHz
Izinsiza: DW-UHF-4.5KW ukukhishwa kwamandla okufaka amandla okufakelwa kwamandla.
Inqubo Ukukhishwa kwamandla okufakwa kwe-DW-UHF-4.5KW kusetshenziselwe ukufeza le miphumela elandelayo: • Izinga lokushisa lika-13000F lifinyelelwe ngemizuzwana emi-3 kusetshenziswa ijika ezintathu, i-0.2 ″ ID, ikhoyili yensimbi ehambayo. Lo mklamo wekhoyili uvumela ukusetshenziswa kokukhomba kokushisa endaweni ethile. • Amaphutha angaphezulu agcinwa ebuncane ngenxa yokusetshenziswa kwesikhukhula segesi esasine-Hydrogen kanye ne-agent engafakwanga amanzi. I-Hydrogen isebenza njenge-ejenti "eguquguqukayo" eqeda isidingo sokugeleza. Igesi engena iqeda i-oxidation yezinsimbi lapho kushisa kakhulu. Lezi zici ezimbili zikhiqiza umkhiqizo ophelile ngaphandle kwesidingo sokuhlanzwa kwangemva kokubopha. • Ukuthungwa kwamanje kungagcinwa ngenxa yokusetshenziswa kokufudumeza okunganqamuki okuvumela ukususwa kalula komkhiqizo ophelile. Imiphumela Kukonke, ukushisa kwe-induction kugcwalise zonke izinhloso ezisungulwe yikhasimende ukukhiqiza amajoyini wekhwalithi yekhwalithi ekwenziweni kwamafreyimu e-eyeglass.
Izigaba Ubuchwepheshe Amathegi I-brazing eyeglass frame induction ye-heat, Ama-Frames Eyeglass Frames, I-Brazing Eyeglass Amafomu Nge-Induction, Isakhiwo se-eyeglass ye-high Frequency Brazing, Uhlaka lwe-RF lwe-Eyeglass frame